Thought of the week | Ishukumiso kwisivumelwano sokuthengiswa kwepropathi - STBB
Home > Thought Of The Week > Thought of the week | Ishukumiso kwisivumelwano sokuthengiswa kwepropathi
Ngelixa amanye amaqela kwisivumelwano sokuthengiswa kwepropathi ngamanye amaxesha ethatha ixesha lokwenza uluhlu oluchanekileyo lwezinto zikhutshelwe ngaphandle okanye zibandakanywe kwintengiso, umntu uhlala efumana izivumelwano ezihluleka ukunika ukucaciswa malunga noku kwaye iziphumo zisoloko zingapheli-zingxabano, ixesha elide emva kokudluliselwa.
Kulula ukunqanda uninzi lokungaboni ngasonye xa umntu egcina umthetho jikelele engqondweni. Oku kubonelela ukuba xa umthengi ethenga umhlaba, unelungelo lokufumana umhlaba nakuphi na ukuphuculwa komzimba okungapheliyo (ezinjengeenqwelo zokulwa ezisandul ‘ukwakhiwa) kunye nazo zonke izinto ezinamathiselwe ngokusisigxina kolu phuculo kunye / okanye izakhiwo Umhlaba ekuthethwa ngawo (njengeetanki ezinkulu zikaJo Jo-Jo okanye ukuhombisa ngaphezulu kwengca).
Xa usenza isigqibo sokuba ngaba into ethile inamathelwe ngokusisigxina kwipropathi, makuqwalaselwe ezi zinto zilandelayo:
Uhlobo lwento leyo kunye nenjongo yokuncamathiselwa kwento leyo: Into leyo kufuneka inamathelwe kumhlaba okanye kulwakhiwo / olwakhiwe emhlabeni. Kufanele ukuba ibe yinto ehlala ihleli okanye icetyelwe ukusebenzela umhlaba ngonaphakade;
Ubungakanani bento eqhotyoshelwe kulo umhlaba: Kuya kuthathelwa ingqalelo ukuba yinto esisigxina ukuba ukususwa kwento leyo kuyakubangela umonakalo omkhulu kwisakhiwo esiqhotyoshelwe kuwo; kwaye
Injongo yomnini xa into iqhotyoshelwe.
Kubalulekile ukuba abathengisi balungiselele uluhlu lwezinto eziza kubandakanywa kwintengiso, ngaphambi kokudweliswa kwepropathi kunye nomthengisi wepropathi. Kuyakhuthazwa ukuba olu luhlu lube yinxalenye yegunya lomthengisi kunye nearhente ukwenzela ukuba i-arhente ithuba lokubonisa izinto eziza kususwa ngumthengisi ngaphambi kokubhaliswa kohambiso. Ngenye indlela, uluhlu lungabandakanywa kwisivumelwano sokuthengisa ukwenzela ukurekhoda injongo yenyani yomabini amaqela.
Ngokwenza umzekelo – ukuba u-X uthengisa ipropathi yakhe kwi-Y kwaye kamva uthatha isigqibo sokuba uya kususa i-chandelier ehleliweyo kwigumbi lokuhlala kunye nezibuko elihleliweyo kwigumbi lokuhlambela ngaphambi kokuba ahambe ke uY unokunyanzela into nganye ukuba ihlale kum Ipropathi okanye itshintshwe ngento enexabiso elifanayo. Ukuba u-X wenqabile kwaye u-Y akhathazwa kukususwa kwezinto ke uY unelungelo lokufuna ingcebiso kwezomthetho aze athabathe amanyathelo angaphaya kuX.
Kubalulekile ke ngoko ukuba umthengisi aziqhelanise namalungelo abathengi ngokunxulumene noku kungasentla kwaye aqinisekise ukuba ususa kuphela izinto ezingafakwanga ngokuthe ngqo kuthengiso, izivumelwano zomlomo ngalo mgaqo kufuneka zithintelwe ukuza kuthi ga ngoku. ukuba kunokwenzeka.